Wafdiga iyo Ciyaartoyda Soomaaliya ee Tartanka Olympikada Nanjing oo gaaray China
Saturday August 16, 2014 - 15:09:26 in Xiriirka Ciyaaraha Fudud by Nocsom Editor
Waxaa magaalada Nanjing ee dalka China gaaray wafdiga iyo ciyaartoyda Soomaaliya u metelaya tartanka Olympikada Dhalinyarada aduunka 2014 kaasi oo 16-ka bisha ka furmaya halkaasi.
Gudoomiye-ku xigeenka XSCF marwo Khadiijo Aden Daahir,Tababare Maxamuud Cadoow,Orodyahan Axmed Xuseen xassan iyo orodyahanad Maryan Nuux Muuse oo ku tartami doona noocyada orodka 800m iyo 200m ayaa,halkaasi waxaa kusoo dhoweeyay Macalin Cumar C/qaadir Baarajab oo GOS u qaablisan tartankaasi.
Cumar Baarajab oo Gudiga olombikada u qaabilsan carabta iyo aasiya ahna madaxa wafdiga GOS ee tartankaasi ayaa maalmo kahore si weeyn loogu soo dhoweeyay halkaasi,isagoo xusey in GOS ay mar waliba ku dadaasho sidii calanka dalka Soomaali uga muuqan lahaa fagaarayaasha caalamka.
Tartanka Olympica-da dhalinyarada aduunka (Nanjing 2014 Youth Olympic Games) oo ah kii 2aad ee la qabto ayaa wuxuu si rasmi ah u bilaaban doonaa 16-ka bishan isagoo soo xirmi doona 28-ka isla bishaan Agoosto.
Waaxda war-faafinta GOS